Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Ny vanim-potoanan'ny ski eoropeana vaovao dia mihantona amin'ny fifandanjana
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Sports • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny fangatahana fitsangatsanganana ski any Eropa dia antenaina hiharatsy amin'ity taona ity noho ny fitomboan'ny tranga COVID-19 ary ny mety ho fihenan'ny tongotra any amin'ireo toerana fanaovana ski lehibe amin'ny fiandohan'ny volana Desambra.
Mazàna ny volana Desambra no ahitana mpitsangatsangana tia manao ski Eoropa, izay manonitra ny fitotonganan'ny kaontinanta taorian'ny fahavaratra amin'ny dia. Ohatra, nahita fiakarana 38.3% ny fitsangatsanganana an-trano sy any ivelany nanomboka tamin'ny Novambra ka hatramin'ny Desambra 2019 - tamin'ny taona lasa izay tsy nisy fiantraikany tamin'ny valan'aretina.
Ity fitomboana henjana amin'ny fangatahana fialan-tsasatra amin'ny volana Desambra ity dia matetika milalao eo am-pelatanan'ny toeram-pialan-tsasatra Eoropeana, ary maro no mihevitra ny volana Desambra ho fiandohan'ny vanim-potoanan'ny ski ofisialy. Na izany aza, ny fisondrotan'ny fangatahana mahazatra dia hisy fiantraikany amin'ny fihanaky ny valan'aretina indray mandeha amin'ny tsenan'ny loharano ski lehibe sy toerana haleha.
Araka ny fanadihadiana farany, 25% amin'ireo namaly ny Eoropeana no nilaza fa mbola 'manahy mafy' momba ny valan'aretina COVID-19 izy ireo. Tsy dia tsara loatra ny isan-jato lehibe toy izany, ary manantena ny orinasa Eoropeana maro no hampiato na hanafoana ny drafitry ny fialan-tsasatra raha hitany fa manomboka mitombo indray ny fifindran'ny viriosy.
Hatahotra ny ho ratsy indrindra ny toerana fanaovana ski toa an'i Frantsa, Italia ary Soisa, ka maro no miantehitra amin'ireo volana ho avy mba hanonerana ny sasany amin'ireo fatiantoka niainana tao anatin'ny vanim-potoana roa farany. Eoropa, indray mandeha, dia mahita ny tenany eo amin'ny ivon'ny areti-mifindra - toy ny manomboka mahazo vahana ny vanim-potoanan'ny ski.
Ny toe-javatra COVID-19 ao amin'ny Germany Mety ho antony lehibe hanapahan-kevitra amin'ny fahombiazan'ny vanim-potoanan'ny ski eoropeana ho avy. Alemana dia manana mpilalao ski betsaka kokoa noho ny firenena hafa any Eoropa, ka mahatonga ity tsenan'ny loharano ity ho zava-dehibe ho an'ny toerana fanaovana ski. Fanampin'izany, i Alemana no tsenam-barotra mivoaka fahatelo avo indrindra eran-tany tamin'ny taona 2020, mampiseho ny heriny mandany sy ny fahavononany hanao fitsangatsanganana iraisam-pirenena mandritra ny areti-mifindra.
Araka ny notaterina tamin'ny 24 Novambra 2021, ny isan'ny areti-mifindra COVID-19 vaovao nisoratra anarana tao anatin'ny iray andro dia tafakatra avo be. Germany. Fanampin'izay, tafakatra mihoatra ny 400 ny isan'ny tranga naharitra fito andro manerana ny firenena Germany dia hiteraka ahiahy eo amin'ireo toerana fanaovana ski eoropeana satria mety hisy ny famerana ny dia, ka miteraka fiatraikany lehibe amin'ny fampidiram-bola ho an'ny toeram-pitsangatsanganana sy orinasa hafa mifandray amin'ny fizahantany ski.